Nlekọta nduku n'oge na mgbe okooko - magazine "Potato System"
N'oge okooko osisi, akụrụngwa kpụkọrọ akpụkọ pụtara, ọnụọgụgụ na ogo ya nke ukwuu dabere na ọnọdụ nke ọhịa ahụ toro. N'ime oge a dị mkpa, poteto kwesịrị ịgbara ya mmiri, akwa akwa ya na nchebe ya site na ụdị nduku nke Colorado.
Anyị ga-atụle akụkụ atọ niile nke nlekọta, yana nyochara iche iche ihe kpatara na poteto anaghị ito ma ọ bụ okooko osisi apụta nke ugboro abụọ na oge. Ọtụtụ mgbe ọ dabere na ụdị dịgasị iche iche, mana oge ụfọdụ, achọrọ ntinye nke onye na-elekọta ubi.
Atụmatụ nke okooko osisi ifuru. Mmadu choro tubers. Ọbụna n'elu, nke na-enweta ọtụtụ nri na ala, na-ahụta dị ka mgbakwunye dị mkpa nke a ga-anagide. Kedu ihe anyị nwere ike ikwu maka okooko osisi: ha dị ka nje ndị na-abaghị uru ma ọlị, jiri ịnụ ọkụ n'obi na-amịpụta ihe kachasị mma site na osisi ahụ. Ya mere, tiori mụrụ na i nwere ike budata dịkwuo mkpụrụ ma ọ bụrụ na ị na-ewepu okooko osisi na elu epupụta n'oge budding oge.
Ma poteto bụ ihe dị ndụ dị ndụ nwere mmemme nke aka ha, nke mkpụrụ osisi bụ naanị ihe nkwado maka ichebe ọnụọgụgụ. Oke ohia a na - eme ka ewepu ahihia ya na akwukwo ya di oke egwu.
Osisi ahụ merụrụ ahụ ga-arịa ọrịa n'ụdị dị nwayọọ, ma ọ bụ ọ ga-etolite ọbụna ụyọkọ karịa iji mejupụta ihe funahụrụ ya. Dị ka o kwesịrị, a ga-ewepụ okooko osisi ọhụrụ dị mkpa maka mmepe nke ihe metụtara. Ego di ot whichu ebe ihe njo na-akwụ okpukpu abuo. Mkpụrụ osisi ọhụrụ agaghị apụta ma ọ bụrụ na i wepularị okooko osisi amaala ifuru. Mana mgbe ahụ usoro a anaghị enwe isi ma ọlị, ebe ọ bụ na okooko osisi abanyelarị nri.
Ihe egwu ozo di. N’ubi nduku, odi n’aka na enwere otu ohia pere mpe. Chapu ahihia na ahihia, onye na-elekọta ahihia anaghị ekpochapụ ngwa ọrụ na aka mgbe ọ gachara ịhazi osisi ọ bụla, yabụ, site na ọnya ndị mepere emepe na Ome, ọ na-ebute ha ọrịa fungal. Yabụ na n'ihi agụụ ịba ụba ihe ọkụkụ, i nwere ike tufuo nnukwu akụkụ ya.
Na mgbakwunye, etinyere ya na nnwale na otu ma ọ bụ abụọ karịa tubers na-emejuputara na bushes na ifuru wepụrụ karịa na osisi ndị na-agba ọtọ. Ma ọ bụrụ na bushes anaghị emerụ ahụ, poteto a na-eto buru ibu ma nwee ọdịdị mgbe niile.
Ọ bụ ihe amamihe dị na iwepu buds naanị mgbe ị na-eto ụdị dịgasị iche maka ịkọ ihe, mgbe ọnụ ọgụgụ tubers dị mkpa karịa nha ha.
Nduku okooko ahihia
Ọ bụrụ n ’ị hụkwara ọtụtụ ndị na - achọ okooko osisi - o yikarị n’ihu gị - nke ọ bụla n’ime mkpụrụ osisi ochie a chọpụtara. N'oge na-adịbeghị anya, ndị na-azụ nwa agbajila ụdị dịgasị iche iche nke oge ntoju pere mpe ma ọ bụ ghara inwe okooko osisi. Mmekpa a na bushes dị obere. Dịka ọmụmaatụ, ụdị Rocco na Mariella nke ọma. Iche-iche Oge opupu ihe ubi na ọkọchị nwekwara ike ghara oge ntoju, na na iru mmiri nkịtị ọ blooms ngwa ngwa. Ahịrị ndị a kụrụ na ndò anaghị eto nke ọma.
Oge ntoju nduku anaghị emetụta guzobe na uto nke tubers, mana enweghị okooko osisi na-egosipụtakarị na onye rụrụ ubi ahụ mehiere ma ihe ọkụkụ ahụ nọ n'ihe ize ndụ.
Na mgbakwunye na njirimara nke iche iche na shading nke ibé ahụ, e nwere ihe abụọ ọzọ kpatara poteto anaghị ito:
- osisi enweghi mmiri. Ọ bụrụ na akwadoghị ịgba mmiri ngwa ngwa, tubers agaghịzi akpụ ma tolite n'okpuru ala, n'ihi nke a, ihe ubi a kụrụ n'oge mgbụsị akwụkwọ ga-adị ntakịrị;
- na ala - ngafe mmiri na nri nri nitrogen. N'okwu a, ike gị siri ike, kama ịbụ nke kpuchiri ahịhịa ya, dinaa ala. Okwesiri ịkwụsị ịgbara mmiri, bibie akwa dị elu (ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ogologo nke ị ga), tinyezie ash na ala (otu iko kwa 1 mita nke akwa), tọghe ala ma gwuo egwu spud bushes.
Mmiri ihu igwe, mgbe ogologo ọkọchị gachara, ọ na - eme ya mgbe ụfọdụ na nduku blooms oge nke abụọ. Nke bu eziokwu bu na n'ihi okpomoku oku a na –eme ka ndi mmadu ghara idi too, mgbe mmirizozo buru, “oke mmiri” nke a abia na nduku ma ohia na acho iwepu oge. Isgbara mmiri ka mma mgbochi nsogbu a. Ọzọkwa, bushes nke e wepụrụ buds nwere ike oge ntoju ugboro ugboro.
Potatoesgbara nduku n'oge okooko
N'oge budding na okooko osisi, nduku bushes mkpa mmiri. Ọ bụrụ na mmiri ezighi, mgbe ahụ mgbe mbụ buds apụta, wụchaa ahịhịa ahụ n'ụba: na ọnụego opekata mpe 3 lita mmiri. Mkpa ịgbara mmiri dị mfe ikpebi: o zuru ezu ịmetụ ala n’ogologo nke 5-6 cm site n’elu. Ọ bụrụ na mmiri dị, ọ ka mma yigharịrị ịgbara mmiri, ebe ọ bụ na oke mmiri ga-emebi tubers.
A na-enye nduku mmiri n'ụtụtụ ma ọ bụ na mgbede. N'ụbọchị nke abụọ mgbe nke a gasịrị, ịkwesịrị ịtọghe ala ma spud bushes, nke mere na mgbọrọgwụ ga-enweta ọ bụghị naanị mmiri, kamakwa oxygen. Izu abụọ mgbe nke a gasịrị, ọ bụrụ na ala akpọọkwara nkụ ọzọ, ịnwere ike ị waterụ mmiri.
Na ihu igwe kpọrọ nkụ, mgbe ịgbara ya mmiri, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikpuchi ala. Usoro ahụ anaghị ewe oge na mbọ dị ukwuu, mana ịkwesighi ichegbu onwe gị maka ịkọ ọka na ọdịda ka ọ pere mpe ma ọ bụ gbawaa.
Topping okooko nduku
Mkpụrụ na-apụ apụ chọrọ ihe oriri na-edozi ahụ. A, abụọ basal top mgbakwasa nduku na-rụrụ n'oge okooko:
- na mmalite nke budding iji mee ka okooko dị ngwa ngwa (kwa otu mita nke akwa n'ala na-eme ngwakọta nke 3 tablespoons nke ash na teaspoon nke potassium sulfate);
- 4-5 ụbọchị mgbe mmalite nke uka okooko iji mee ngwangwa uto nke tubers (2 tablespoons nke superphosphate - kwa linear mita nke bed).
Ọzọkwa na mmalite nke budding, enwere ike ịme akwa akwa foliar. Nhọrọ dị omimi maka lita mmiri 10 (otu narị square square nke ubi nduku):
30-40 g nke urea;
50 g nke potassium sulfate;
10-20 g nke ammonium nitrate;
gwakọta 2 g nke ọla kọpa sulfate, 10 g nke nnu nnu, 40 g nke ammonium nitrate, 200 g nke superphosphate.
Ikpuchita ahihia site na ebe nduku
Nsogbu a bụ na a ghaghị iji kemịkal fesa poteto n'oge ohia. Ọ ga-eji aka kpochapụ paradaịs. Na mgbakwunye na nchịkọta ihe eji arụ ọrụ n'ime bọket, ọgwụgwọ ndị mmadụ ga-enyere aka:
- hapụ otu kilogram nke ntụ, gwakọta na mmiri mmiri 10 l, sie mgbe ọ dara jụụ - gbakwunye 40-50 g nke nhicha akwa nhicha ahụ na grater ọma;
- jiri ahihia ya mee ahịhịa.
Enwere ike iji ego ọ bụla n'ime ego ndị a kwa ụbọchị 7-10. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ pests, ekwesịrị iji mkpụrụ osisi mepụta ahịhịa. Adabara, dịka ọmụmaatụ, "Bitoxibacillin", "Akarin" ma ọ bụ "Fitoverm".
Nduku na-elekọta mgbe okooko
Mgbe nduku blooms, ọ gaghị ekwe omume mmiri bushes: oke iru mmiri bụ mma ebe maka mmepe nke mbubreyo blight. Nri adighi kwa nkpa.
Ọ bụ ezie na n'elu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ha na-fesaa ọtụtụ ugboro na ụfọdụ ndiife usọbọ nke Colorado nduku enwe. Enwere ike iji kemịkal siri ike mee ihe na ọnwa abụọ tupu ọnwa owuwe ihe ubi. Ya mere, ụdị ego a kwesịrị ekwesị maka naanị ụdị dị iche iche.
Mpaghara Kaliningrad aghọwo otu n'ime ndị na-ebubata poteto mkpụrụ na Russia